Bilisummaa bira gayuuf Oromoon Bulchiinsa Lammaa Magarsaa Akka Riqichaatti itti fayyadamuu qaba - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Bilisummaa bira gayuuf Oromoon Bulchiinsa Lammaa Magarsaa Akka Riqichaatti itti fayyadamuu qaba
Bilisummaa bira gayuuf Oromoon Bulchiinsa Lammaa Magarsaa Akka Riqichaatti itti fayyadamuu qaba
Siyaasa Itophiyaatiif yeroon kuni yeroo gannaati. Rooba. Mucuca. Dukkana. Malaa fi tooftaan maletti tiratuun, osoo harka wol-hinqabatin fagoo deemuuf tattaafatuun, riqichaan maletti laga guute ce’uuf wixxifatuun baay’ee baay’ee hamaadha. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa fi Qabsoon Oromoo itti jirtu kan qalbiin xiinxaluuf wanti jalqaba itti mudhatu laga ce’uuf riqichi hedduu barbaachisaa ta’uu isaati. Haala rakkisaa kana keessatti riqichatti fayyadamuun imalas ni gabaabsa, gaaga’ama sabarra gayuu malus ni hir’isa. Abshaalummaadha
Kaayyoon Oromoo ifa. Lammaa Magarsaa aangotti baasuu osoon hin taane Oromoo bilisoomsuudha. Bilisummaan kan jirtu garuu laga gama. Bilisummaa bira gayuuf laga ce’uun dirqama. Laga guute ce’uun kan danda’amu karaa lamaan: riqichaan ykn daakkaadhaan. Balali’uudhaaf hanga ani beekutti Oromoon koola baase hin jiru. Galaana guute daakuun gatii guddaa nama kaffalchiisa. Kuni filannoo osoo hin taane bakka riqicha wanti jedhamu tokoo hin jirre ykn hanga galanni guute darbuuf obsaan eeguun yoo hin danda’amne qofa karaa kanaan ce’uuf kan yaalamu. Duruunfannee galaana guutettis hin deemnu. Teennee eegufis gabummaan jaarraa olii obsa nu fixachiisee jira. Falli riqciha. Akka hiree ta’ee amma riqichi woyii argameera; odeessuu fi fakkeessuu dhiisnee abshaalummaan ittui fayyadamuu dandeenna taanaan. Riqichi amma argame ykn gara dirree bilisummaatti diriirfame Lammaa Magarsaati. Worri Lammaan riqichaa miti jetten falli qabdan galaana daakuu ykn hnaga darbuuf eeggachuudha. Hiree gaarii. Worri Lammaa fi garee isaa akka riqichaatti fudhannu riqicha kanarra dabruudhaan gara dirree bilisummaatti ce’uuf malachuu, tooftaa baafachuu qabna. Riqichattiin waan abdatan ykn irratti uf dagatan miti. Dafanii irra daruun murteessaadha. Riqichi kuni dheeraa, reeqqisaa fi sodaachisaadha. Waanuma fedhee yoo ta’e galaana gannaa guutetti seenuu irra riqichuma kana irra obsaa fi naamusaan darbuu woyya. Galaanni amma jiru daaktuu mitii gudeelcha gangalcha. Qalbii qabna, waa hubanna taanaan, kan nu baasu, bakka ijaa fi qalbiin teenn jirtu kan nu geessu riqicha (#GareeLammaaMagarsaa) kana. Diinni kana waan beekuuf Lammaa Magarsaa fi garee isaa dhabamsiisuu fi dadhabsiisuuf (riqciha bakkaa kaasuuf) halkanii fi guyyaa hojjataa jira. Kuni nama heddutti mul’ataa jira hin fakkaatu. Jibbaa durii qofaan waan haguugamaniif sabbontonni tokko tokko jijjiirama OPDO kessatti mudhataa jiru arguuf rakkataa jiru. Dhugaa tana akka nuti hin argineefis kan nurratti hojjataaru hin jiru jechuunis hin danda’amu.
Riqichi amma jiru amansiisaa miti. Riqichi caccabaadha. Riqichi kuni dadhabaadha. Sa’aa kamittuu galaanni Woyyaanee riqicha kana gangalchuu mala. Riqicha kana tikfachuun, yoo caccabus suphachuun, yoo daqus utubachuun dirqama Oromoo gara bilisummaatti ce’uu fedhu hundaa ta’uu qaba. Qabsaayaan ykn sabboonaan riqicha kana tuffatu ykn riqichi kamuu na hin barbaachisu jedhaa galanatti ciisu uf nyaachisa. Hoogganaan riqichaan malatti laga guute ce’uuf tattaafatu Qeerroo Oromoo ficcisiisa. Oromoon bilisummaa dhugaa bira gayuuf #GareeLammaaMagarsaa akka riqichaatti itti fayyadamuu qaba. Garee kana uf jalaa kaasuun ykn yoo diinni kaasu cal jedhanii ilaaluun tooftaa dogoggoraatti. injifannoo arganne akka gaaritti haa qabannuu. Tan haftee dhawaataan haaguttannuu. Kan fannoo fuudhaaf kan bobaa akka hin buusne. Bakka jirtutti itti yaadi Oromoo.
Previous articleJijiiramuun OPDO ifa; daran akka jijjiiramtuuf qabsaayuun gahee sabboontota Oromooti
Next articleItoophiyaan Interneetii danquu fi ugguruun addunyatti sadarkaa lammaffaa qabatte